galmudugnews.com » Musharaxa Dr Cusmaan Maxamed Gacal oo La Kulmay Sheikh Shariif sh, Muxudiin Celi (Sawiro)
Home » WARARKA » Musharaxa Dr Cusmaan Maxamed Gacal oo La Kulmay Sheikh Shariif sh, Muxudiin Celi (Sawiro) Musharaxa Dr Cusmaan Maxamed Gacal oo La Kulmay Sheikh Shariif sh, Muxudiin Celi (Sawiro) galmudug on
No Comment Views 16478Musharax xilka madaxweyne ee Soomaaliya Dr. Cusmaan Maxamed Gacal ayaa xalay kulan Afur iyo Casho Sharaf ah la qaatay Sheikh Shariif Sh; Muxudiin Celi oo ka mid ah culumada Sida weyn loogu qadariyo Dalka Soomaaliya.
Kulanka oo ahaa mid wadatashi ah ayaa lagu lafaguray xaaladaha ugu danbeeyey ee dalka iyo sidii loo samata baxin lahaa shacabka Soomaaliyeed,ee dhibka heestay mudadi ka danbaysay tan iyo markii aay bur burtay dowladda dhexe dalka ka talin jirtay.
Ugu horeyna waxaa goobta ka hadlay Sh, Shariif Sh, Muxudin Celi oo sheegay inuu si weyn u soo dhoweynayo aragtida Musharaxa ee ku aaddan in dalka la samata baxiyo, isaga oo na sheegay in loo baahnaa waqtiga haatan lagu gudo jiro in aqoonyahada Soomaaliyeed u istaagan wax u qabashada Dalkooda iyo dadkooda.
waxaa kalo idin kuugala dar daarmaya ayuu yiri Sheikh Shariif Sh, Muxudiin celi in hadalka ficil loo bedelo,Wuxuuna ugu mahad celieyey Musharax sida uu markasta isugu xilqaamo xal u helidda iyo midaynta jaaliyadaha Sooomaalida dalka dibadiisa oo lagu xasuusto intu ku ahaa gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida, dalka talnaaniga Dr Cusmaan in wax badan u qabtay.
Ugu danbeyn Sh, Shariif Sheikh Muxudin Celi, ayaa Musharaxa duco iyo dar daaran iskuugu daray asagano kula dar daarmay in sidii Dr, Cusmaan horay loogu bartay ee umada Soomaaliyeed ugu sineed ku hogoomiyo hadii uu ku guulesto hamigiisa.
Dr. Cusmaan ayaa Munaasabado uu musharaxnimadiisa uu kaga dhawaaqay dalka Talyaaniga waxaa uu ku balan qaaday in hadii uu ku guuleysto madaxtinimada dalka uu wax ka qaban doono arrimaha bani’aadanimada, la dagaalanka musuq maasuqa iyo xiriirka Arrimaha dibada oo aqoon durugsan u leeyahay.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21013 hitsContact US - 19649 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15750 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15250 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13943 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13886 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13820 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13477 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11784 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11771 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11733 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11527 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11506 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11357 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11180 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11168 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11061 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11047 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10794 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10355 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10319 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10284 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10020 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9963 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9785 hits Home About